Inqaba ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngenxa yeemeko ezingaphaya kolawulo lwakho, awunandlela yimbi.
Intsingiselo yekhadi le-tarot «Inqaba»
Phantse zonke iiyantlukwano ze ileta ende, le ntlekele iyamangalisa okanye yenzekile. Iidemon zempambano nokuphelelwa lithemba ziyakhululwa kwiindawo zakudala zokufihla, kwaye Indalo iyelenza nokusilela kwabantu ekuphazamiseni uluntu. Ukuphazamiseka kukudibana kwaye akunabuntu. Masikhumbule ukuba le mifanekiso yenzelwe izidwangube kunye nabafundisi abafundileyo, ibakhumbuza ukuba yeyona nto banokulahlekelwa yiyo xa isikhundla solawulo siwile.
Umbane ulungile ukubuyisela karmic ngesiphoso sabo ubutyebi babo buvela ekuxhatshazweni okanye ekuphathweni gadalala kwabanye. Imibhalo engezantsi yanamhlanje ingathi "inguquko," ebonisa ukuba nge utshintsho olukhulu kwintlalo, abacinezelweyo banokufumana ithemba elitsha lamaxesha angcono. Amava eNqaba eza njengombane ukuze ahlasele ulawulo lwangaphambili, emva kwayo yonke loo nto el mundo unokuqala ngokutsha ngokulinganayo.
Nguwe ekufuneka usebenze njengabaxhasi beenguqu.
Cebisa ikhosi yamanyathelo eya kungqinelanisa into oyifunayo kunye noko kunokwenzeka ngoku.
Con ikhadi leTarot tarotZicinge njengearhente yenguqu. Inokwenzeka le ndima yokuzincama yenza iimeko zoxinzelelo. Umbono wakho ukukubonisa ukuba utshintsho olukhulu sele lukhutshiwe yimikhosi emikhulu kakhulu kunabantu nje, ngenxa yoko awusenakuxhathisa.
Ngoku ungangaphambili, uqaphele kwaye ukwamkela ubukho bomlilo bekamva elingena ngoku. Zama ukulamla ezona ndawo zinzima zotshintsho njengoko zisenzeka, ukuze abona basesichengeni bakhuseleke kakhulu. Zazise, ​​kunye nabanye ebomini bakho, ukuba unikezela ngezixhobo zakho ukuze ungenise ikamva elingcono.